Tsy vitsy ny Distrika efa misi traka an’ireo fampanantenana nataon’ny Filoha Andry Rajoelina. 2 juillet 2020
Ho an’ny Distrikan’i Miarinarivo indray dia ny asa fanamboaran-dalana izay tena mamaly ny hetahetan’ny vahoaka no efa sitrahan’ireo vahoaka amin’izao fotoana izao. Efa azo lazaina ho milamina ihany koa ny lafiny fandriam-pahalemana amin’ireo Kaominina maro mandrafitra an’ity Distrika ity. Ny fandriam-pahalemana izay tafiditra ao anatin’ireo velirano 13 nataon’ny Filoham-pirenena, ka efa misitraka feno izany ireo mponin’i Miarinarivo, hoy ny solombavambahoaka voafidy tao an-toerana. Noho ny ezaky ny Fitondram-panjakana izay niarahana nientana tamin’ny vahoaka no nahafahana nametraka ny filaminana tao an-toerana.